သင်ပာာ ဦးနှောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်သူလား နှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်သူလား | Buzzy
သင်ပာာ ဦးနှောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်သူလား နှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်သူလား
လူတိုင်းပာာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စိတ်ချင်းနှလုံးသားခြင်းမတူညီကြပါဘူး တချို့တွေပာာ အရာရာကိုသတိထားပြီး ဆင်ခြေဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။တချို့တွေကတော့ နှလုံးသားကိုဦးစားပေးပြီးဆုံးဖြတ်တတ်ကြပါတယ်။ထိုထဲမှာသင်ကကောဘာဖြစ်မလဲ?
စာဖတ်တယ် ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်
ဘယ်အရာက လူတစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးဆုံးလို့သင်ထင်လဲ?
You got: ဦးနှောက်ကိုဦးစားပေးသူ
သင်ပာာဦးနှောက်ကို ဦးစားပေးတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာကို အားလုံးစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှ လုပ်သင့်မလုပ်သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတစ်ယောက်ပါ။ ရိုးရိုးအေးအေးနေတတ်ပြီး အမြဲလိုလိုစဉ်းစားတွေးတောနေတတ်ပါတယ်..
You got: နှလုံးသားကိုဦးစားပေးသူ
သင်ပာာ ခံစားလွယ်တတ်သူဖြစ်ပြီး အရာတစ်ခုခုကို နှလုံးသားနဲ့လိုက်ခံစားပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့ကျတာမကျတာမစဉ်းစားတော့ပဲ သင့်အပေါ်ကောင်းသူ မကောင်းသူတွေကို နှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်တုံ့ပြန်တတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ အနေအေးပြီး အမြဲလိုလို စိတ်ကူးယဉ်နေတတ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မြွေ ရဲ. ကျွမ်းကျင်ပါးနပ်စွာ သားကောင်ဖမ်းတဲ့ video ဖိုင်
ဂျာနယ်လစ်တွေနဲ့ အင်တာဗျူး မှာ ၀က် ကလေးကို နို့ တိုက်ပြလိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်
တစ်ကိုယ်လုံး အနီရောင်တွေချည်းဘဲပါတဲ့ အနီရောင်တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်ပေါင်း(၂၅)မျိုး